Otu esi egbu usoro n'ụzọ dị mfe | Site na Linux
Otu esi egbu usoro
N'ụzọ bụ isi, enwere Wayszọ 4 de gbuo n'ụzọ dị irè a usoro en Linux: gbuo ya site na aha, site na ịkọwa akụkụ nke aha ahụ, site na PID, na-arụtụ aka na windo usoro na cursor mouse. Ka anyị lee n’otu n’otu ...
1 Gbuo: gbue usoro site na iji PID ya
2 killall: gbue usoro iji aha ya
3 pkill: gbue usoro site na iji akụkụ nke aha ya
4 xkill: gbue usoro site na iji windo họrọ windo ahụ
5 Commentsfọdụ ihe ikpeazụ
Gbuo: gbue usoro site na iji PID ya
Ihe kachasị gbagwojuru anya ma n'otu oge ahụ ụzọ kachasị mma iji gbuo usoro bụ site na PID ya ("Usoro nchọpụta"). Otu n'ime ụdị atọ ndị a nwere ike ije ozi:
igbu -TERM pid igbu -SIGTERM pid igbu -15 pid
Nwere ike iji aha mgbama (TERM ma ọ bụ SIGTERM) ịchọrọ izipu na usoro ma ọ bụ nọmba njirimara ya (15). Iji lee ndepụta zuru ezu nke akara ga-ekwe omume, ana m atụ aro ịlele akwụkwọ ntuziaka igbu egbu. Iji mee nke a, gbaa ọsọ:
Ka anyị lee ihe atụ nke otu esi egbu Firefox:
Nke mbụ, ị ga-achọpụta PID nke mmemme ahụ:
ps -ef | tee firefox
Iwu ahụ ga-eweghachi ihe yiri nke a:
1986? Sl 7:22 / usr/lib/firefox-3.5.3/firefox
Anyị na-eji PID eweghachiri site na iwu a dị n'elu iji gbuo usoro ahụ:
egbu -9 1986
killall: gbue usoro iji aha ya
Iwu a dị nfe
Otu ihe ị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-eji usoro a bụ na ọ bụrụ na enwere ihe karịrị otu usoro ihe omume ahụ na-agba ọsọ, ha niile ga-emechi.
Cron & crontab, kọwara
pkill: gbue usoro site na iji akụkụ nke aha ya
O kwere omume igbu usoro site na ịkọpụta aha zuru ezu ma ọ bụ akụkụ nke aha ahụ. Nke ahụ pụtara na ọ dịghị mkpa ka ị cheta usoro PID iji zipu mgbaàmà ahụ.
Na nloghachi, usoro a ga - egbu usoro niile nwere okwu abanye. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na anyị nwere usoro 2 mepere nke na-ekerịta okwu na aha, ha abụọ ga-emechi.
xkill: gbue usoro site na iji windo họrọ windo ahụ
Nke a bụ usoro kachasị dị mfe ma baa uru. Ọ bụrụ na ọdachi, pịa Alt + F2 iji weta igbe okwu nke ga-enyere gị aka ime iwu. Site n'ebe ahụ, gbaa iwu na-esonụ:
Urskọ cursor ga-aghọ obere okpokoro isi. Naanị ihe fọdụrụ bụ ịpị na windo ịchọrọ imechi na voila. Usoro bye.
Commentsfọdụ ihe ikpeazụ
Na mmechi, Achọrọ m ịkekọrịta ụfọdụ ndụmọdụ nwere ike inye aka. Na Linux, dịka na Windows, mgbe usoro kwụgidere, windo a na-ajụkarị nwere ike mechie site na ịpị bọtịnụ Mechie (nke dị ka X). Mgbe sekọnd ole na ole, windo ga-apụta na-ajụ anyị ma anyị chọrọ n'ezie igbu usoro ahụ ebe ọ naghị aza nke ọma. Anyị na-asị ee na ọ bụ ya.
Nke a pụtara na usoro ndị akọwapụtara ebe a kwesịrị iji mgbe ihe ọ bụla emeghị mgbe ị pịa bọtịnụ Nso nke windo a na-ekwu.
N'ihe banyere oke ọdachi, echefula na tupu ịpị ya enwere ike ịme a "mma" Malitegharịa ekwentị.
N'ikpeazụ, ọ ga-aba ezigbo uru ịchọpụta usoro ndị na-arụ ọrụ ugbu a. Maka nke a, gburugburu desktọọpụ dị iche iche (GNOME, KDE, wdg) nwere ngwaọrụ eserese nke na-akwado ọrụ a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ha ma ọ bụ naanị ịchọrọ ime ya site na ọnụ, ị nwere ike mepụta ihe ndị a:
Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na ịnweghị ngwugwu kwekọrọ, ị nwere ike ịgba ọsọ mgbe niile:
Nke a ga-edepụta usoro niile na-agba ọsọ, yana aha ha na PIDs.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Otu esi egbu usoro
«Ọma -ef | "grep firefox" abụghị nke "pgrep Firefox"?
Ọma m jiri "pidof" iji nweta PID.
Jago Martinez Ocaña dijo
ihe m kacha eji bu:
~ $ elu
n'egosiputara anyi ndepụta nke usoro eji aru oru, ya buru na anyi kuru "k" ma obu dee "igbu", o gha aju ajuju maka pid nke usoro a ka anyi gbue (anyi guru ya site na elu) wee banye, ipu n'elu anyi puta "q" ".
Nnọọ ezigbo ntinye, mana ụdị a dị m mfe. Ọ bụrụ na ọnụ ala ahụ anaghị agba ọsọ anyị na-anwa iji ctrl + alt + f [1-6] ma mee ya site n'ebe ahụ.
Zaghachi Jago Martínez Ocaña
Kedu ụmụ nwoke nwere ekele maka inyere m aka nyere m nnukwu aka na post a !!!
Nnọọ! O nwere ike ịbụ na iwu xkill na - eme ka mmemme X ga - apụ ma meghee? Maka na ọ na-adabara m mgbe ọ bụla na mgbe m gara onye njikwa ọrụ, usoro ahụ ka dị ndụ na m ga-egbu ya.
Ekwetara m ya, abụ m ọhụụ ọhụụ. Iwu killall na pkill ga-enyere m aka nke ukwuu. Daalụ maka itinye ha, blog dị ezigbo mma.
Zaghachi Octavio Villanueva
Ekwadoro m htop is ọ kacha mma maka nke ahụ ...
na-arụ ọrụ na ndị nọọsụ
sudo apt-nweta wụnye htop
Zaghachi heberth ardila
pidof abụghị maka Unixes niile, dịka ọmụmaatụ Solaris enweghị iwu ahụ, nke ahụ na-eduga anyị iji ps dị ike.
htop kariri verbose na onye oru
N'ihe banyere iji PID, ihe ziri ezi bụ $ igbu PID nke na-eziga mgbaàmà SIGTERM na ndabara, ọ bụrụ na usoro ahụ azaghị, a na-eji $ igbu -9 PID nke na-eziga akara SIGKILL, nke ikpeazụ na-ewepụ usoro ahụ na-ahapụghị ọ bụ otu mmechi ahụ n'ụzọ ziri ezi (enwere ike ịnwe data dịka ọmụmaatụ). SIGTERM jụrụ biko, SIGKILL na-enye ya anyụike 🙂
Ana m ekele gị nke ukwuu, m ga-anwale ya ma ọ bụrụ na ọ ga-eme m ọzọ.
ajuju. Mgbe desktọọpụ gburugburu na-ekokwasị Ubuntu (M na-eji Unitydị n'Otu), enwere ike ịmalitegharị ya na-egbughị usoro ndị ọzọ niile? Adịghị m elu na linux ma mgbe ụfọdụ ọ na - eme m na m na - arụ ọrụ ọ na - ekokwasị onwe ya, naanị ihe m na - eme bụ ịmalitegharị echedo, mana ihe niile m na - arụ na - efunahụ m.
Amaghim ma a gh’onye obi abụọ m.
Enweghị ike igbu usoro na zombie steeti n'ụzọ ọdịnala.
Lee maka nkọwa ndị ọzọ: esdebian.org/wiki/matar-proceso-zombie
Maka ndị toro eto, kedu ka esi egbu usoro na steeti ZOMBIE?
naanị n'ịwa obere nkata 😀
Jorge Vips kwuru dijo
Dị ezigbo mma, naanị ihe m chọrọ ..
Zaghachi Jorge Vips
Eziokwu bu na iwu igbu mmadu bara oke uru. Inwe ike igbu usoro ndị na-akpasu iwe site na ịkpọku igbu bụ nnukwu. N'ikpeazụ iwu nke na-eje ozi ihe.
Ajuju ajuju: Igbu usoro pụtara na ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ. Yabụ, ajụjụ m bụ ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na achọrọ m ịmalitegharị usoro ahụ m gburu, kedu ka m ga-esi mee ya?
O doro anya na ị tinyere ./ (aha nke usoro) &
Na nke a ị na-agba ya ọzọ na PID gị ga-apụkwa 😀
Magburu onwe ya, enwere m oge ịchọ enyemaka dị ka nke a. Ọ baara m uru nke ukwuu. Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta.
Ekele si San Luis Potosí, Mexico.
Zaghachi JC Rivera
Kedụ ka m ga-esi gbuo usoro abụọ amata PID ha n’otu iwu?
Echere m na ọ bụ 'gbuo [PID nke mbụ] [PID nke abụọ]
Ihe na-adọrọ mmasị. Weebụsaịtị a bụ weebụsaịtị m bụ Linux kacha arụ ọrụ.
M n'ozuzu na-eji:
ps ax | grep process_name (nke a ka ịchọta ya na sistemụ ahụ)
igbu -9 process_id
Ana m ekekọrịta nkuzi bash n'ịntanetị n'efu na-agagharị:
https://aprendemia.com/cursos/curso-de-bash-scripting Olileanya ọ ga-aba uru.
Zaghachi Gauchita Watafak
Ma ọ bụrụ na m chọrọ ka ọ bụrụ profaịlụ na Linux naanị nke na-emechi ka ọ kwesịrị?
ima atu Enwere m profaịlụ Firefox abuo
mana achọrọ m naanị otu profaịlụ ka m mechie
Achọrọ m naanị profaịlụ 2 ka m mechie dịka iwu kwesịrị ịdị
- n'ọdịnihu ekele maka azịza ya
kedu ka m ga-esi gbue usoro ụzọ ụzọ ubuntu, jiri otu usoro iwu
Mgbasa * na-aghọ obodo